Cookware Professional "Thomas": Izibuyekezo
Ukudla - omunye komkhulu izidingo zomuntu. Futhi uma inani elincane lomphakathi wabo yomphakathi jikelele nge kwenyanya okuncane yokwamukela ukudla ke kwabanye inqubo ukupheka ezihlukahlukene izitsha - kungcono an art. Futhi ukuqinisekisa ukuthi njalo ngeminithi wachitha ekhishini, wanika ubumnandi nenjabulo, eziningi izinkampani emhlabeni wonke futhi akhiqize kudingekile izinga zikagesi kanye nezitsha. Enye yalezi zinkampani yinkampani German "Rosenthal".
Inkampani ukwenziwa bakhonze kanye Cookware lochwepheshe
Lokhu giant bahlangana ngaphansi kwakhe umyalo ezingaphansi eziningana lemikhiqizo. Omunye wabo ngo "Thomas" kusukela "Rosenthal". Le brand - nomkhiqizi izinto eliphezulu nezinsiza ukuhlobisa nje kuphela inqubo ukupheka, kodwa futhi reception yayo.
Ukusebenzisa ezihlukahlukene izindlela ezintsha, kuhambisana emasikweni esungulwe ukwakha indawo ekahle lapho ukudala yonke imikhiqizo "Rosenthal", kuhlanganise izitsha "Thomas". Izibuyekezo zakho, izincomo kanye neziphakamiso amakhasimende njalo kubonelelwe umugqa omusha imikhiqizo. Okwamanje, i-brand kuyinto nomkhiqizi German ekamelweni lokudlela kuthiwa ekukhiqizweni tableware, izesekeli izinto ziphile ntofontofo.
ukukhathazeka Giant "Rosenthal" ukhiqiza imigqa eziningana ekhishini izitsha. Lezi zihlanganisa:
Imikhiqizo brand "Studi-Line." Lapha ungathola esezingeni zobumba. Brand ngokuvumelanayo nangekutetsemba ihlanganisa izindlela ezintsha kanye namasiko kusungulwa. Abaklami eziningi abasebenza lapho kuvezwa esiyingqayizivele, ezintsha futhi, ngesikhathi esifanayo, amaqoqo sokusebenza.
"Selekshion" ulayini Cookware. A ezihlukahlukene omkhulu ngobumba namabhodlela tableware high kanye nomklamo aphakeme Lowaya Ukwehlukanisa abakhiqizi Cookware encintisana eziningi.
Imikhiqizo adayiswa ngaphansi kwegama lomkhiqizo "Versace". Sha ziyaphawuleka, owaziwa emhlabeni fashion, futhi uncome izixazululo ezintsha ezisebenza ekusebenziseni kwabo olubanzi ukukhathalela "Rosenthal". Ukuhlanganisa i-zikanokusho, likhazimula Flamboyant isitayela, fashion house "Versace" futhi inhlanganisela ivumelane kokuxazulula namazinga olwamukelwa, umfelandawonye phakathi imidondoshiya ezimbili idale nenhle, eyinkimbinkimbi nobungqabavu izindawo yokudlela, ubuhle okuyinto obumangalisayo.
Izinto kanye izesekeli for ekhaya lokubhalela, ukuya emakethe ngaphansi kwegama lomkhiqizo "Sambone". "Gqamisa" umugqa ukuze ukhiqize imikhiqizo usebenzisa insimbi engagqwali nezesiliva. Uma uzizwa ukhululekile e upscale amahhotela nezindawo zokudlela Chic ke lokhu brand kuzosiza kabusha ekhaya emkhathini ziyefana nalezo izikhungo.
Umugqa olandelayo tableware ukukhathazeka "Rosenthal" kuyinto izinto ukupheka, ngithengiswe ngaphansi igama "Hutschenreuther". Izitsha kanye izesekeli ngagama eside German kuvula umthengi obugagu mnene Mediterranean temdzabu Motifs, ukuphrinta ethwala into ngayinye weqoqo. "Ubuhle ehlala isikhathi eside" - ngaphansi kwalesi imikhiqizo isiqubulo uphawu "Hutschenreuther" kuyinto "ubuso" yayo emhlabeni.
Eyesithupha futhi emgqeni wokugcina kitchenware brand "Thomas". "Umklamo, nobani ngifuna baphile" - lokho yisiqubulo sha. Okusebenzayo yokuqala, ezintsha futhi lokudala, stylish nenhle - lena tableware "Thomas". Izibuyekezo ezakhamizi zethu nabo kule legatsha imikhiqizo yenkampani iyivela kancane. Nokho, singamakhosikazi emizi angaphandle kanye yokudlela abanikazi "izigqoko abaphelelwe msebenzi" ukunikela ikhwalithi ephelele kanye nomklamo eyinkimbinkimbi izitsha.
Cabanga sha zokugcina kabanzi. inkampani Izingubo zokupheka "Thomas", nokungelinye ngemigqa elizungezile kuhlanzekile futhi imiklamo kumnandi, eliphezulu futhi multi-purpose baziswa emhlabeni wonke. A anhlobonhlobo imikhiqizo ahlinzekwa igxile nezidingo kokubili nayizimfundamakhwela imikhiqizo ephezulu, kanye ochwepheshe. Dinner amaqembu, umndeni imikhosi, amadili, imishado kanye nemigubho - yiluphi uhlobo mcimbi uzoba ezingeni eliphezulu kakhulu, uma ekhona amatafula izitsha "Thomas". Ukubuyekeza ku ukusetshenziswa izimpahla lenkampani wakwenza kwacaca ukuthi inkampani egcina umkhiqizo izinga ezingeni eliphezulu kakhulu.
Yegatsha futhi umkhiqizo izigaba
Ngaphandle tableware ngaphansi kwegama lomkhiqizo waleli qoqo nazo ziyatholakala ezihlukahlukene izesekeli nezipho. umugqa German imikhiqizo kuhlanganisa izigaba eziningana ezahlukene. Lezi zihlanganisa kitchenware "Thomas" e okuhlukile. Leli qembu lalihlanganisa nalabo 14 zenyathi. Kubalandeli of esiqinile amafomu nenhle futhi agodliwe ezimhlophe amasethi ephelele futhi izinto ngazinye Amici chungechunge. "Obuswacile" tureens "imbiza-bellied" Saucers nezitsha isaladi, round futhi izitsha okusaqanda ngaphandle edging futhi skirting - umkhiqizo legatsha okuthiwa Medaillon. zeJiyomethri, khona "amakhala" short zalungisa ikhofi amabhodwe, amasumpa futhi izinkomishi ngokungabi bikho iyiphi into engadingeki ikuvumela ukuba ukhethe enye isethi izitsha okuthiwa Vario Pure. Imibala egqamile we Motifs Brazilian imigqa mncane ukuhlobisa izinto Medaillon Rio de Janeiro. A zenyathi ahlukene izitsha kanye nezitsha nge imiphetho ephakanyiswe. Lesi sakamuva libhekisela Quadrondo chungechunge.
Cutlery wale nkampani libanakekele ekhethekile. Lapha, ikhasimende ungaphuma oyedwa yochungechunge ezimbili: skid futhi Tema. Eyokuqala izinto olulodwa ezenziwe ngensimbi engagqwali. I subtype yesibili - lishona khona. Futhi yena nabanye isigaba kahle uthumele kokugeza Umshini wokuwasha izitsha.
Ukukhiqiza ukusetshenziswa kobuchwepheshe ezintsha kanye inhlanganisela izitayela ezahlukene - lena tableware "Thomas". Izibuyekezo umsebenzi abaculi owayephila baye bawubona kuye kwenza nabaqambi inkampani German ukudala isipho lishona, lapho ibala elikhanyayo kubonakala mkhuba isiko yesimanje. Ngakho weza izinkomishi ukukhanya Saucers esekelwe umsebenzi Endi Uorhola.
Ungathanda imibala ukufanisa ikhishi lakho nge touch of izitsha? Khona-ke udinga ukungena yochungechunge Sunny Day Imibala. Plates, izitsha, izinkomishi, Saucers, nezinye izinto eziningi tintfo owethulwe lapha ngemibala engaphezu kwamashumi amabili. Jabulela inkomishi yekhofi ukusiza amasethi eliqhakazile izigaba Sunny Day Ikhofi angeziwe. Dinner amasethi, imikhiqizo eyenziwe izindwangu ezithambile ekhishini nezinsiza ahlukahlukene Sunny Day Ikhishi usizo ukujabulela njalo ngomzuzu ekhishini futhi ekudleni.
Kufanele kuqashelwe ukuthi, ngaphezu tableware, isikhundla ahlukene kuyinto tableware professional "Thomas". Lesi sigaba sihlanganisa izimbiza, amapani, ingcindezi endzaweni lephephile kanye nezinye izitsha ukuthi abahileleke ngokuqondile inqubo ukupheka. Ukuze kujabule abathengi, lo mkhiqizo awukho ayebiza, isibonelo, ezinye nozakwabo German. Isizathu salokho - indawo zokukhiqiza. Okuvelele e wodwana of imishini eyenza inhlangano Chinese lithole kusukela inkampani Franchise German.
Tableware "Tomas Awe-Kuk RSEP Ukuphela" - izintwana ekhishini ezenziwe ngensimbi engagqwali. Lokhu kwaziswa kwenza kube nokwenzeka ukusebenzisa izimbiza namapani isikhathi eside. Njengomthetho, zonke nesembozo ngochungechunge oluthi professional zakhiwe ingilazi omnene. Ngenxa ngemoto amaningi, ezakhelwe phansi isitsha ngasinye, ukudla lifudumeza ngokulinganayo, kodwa sibonga non stick lokunameka Teflon Khetha, futhi asisho anamathele. Iyiphi into kulolu chungechunge, kungakhathaliseki pan "Thomas" noma pan ilungele ukupheka kuhhavini. Ngaphezu kwalokho, ukuba khona endlini nge gas endzaweni lephephile, ugesi, ngobumba, Halogen noma lokungeniswa hob akubi isithiyo endleleni ukwenza ukuthenga yanoma yiziphi uchungechunge isihloko. Ukuze kujabule bonke abanikazi tableware professional "Thomas" (pan, ladle, a cooker ingcindezi, Casserole, njll) langa 'sizakhele ubungane' nge Umshini wokuwasha izitsha.
Izibuyekezo namazwana ikhasimende
Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo wukuthi mikhiqizo angathengwa Hypermarkets kanye kaningi phezu nokwabelana. Lokhu icebo ukumaketha ziqondiswe Ukushisa isithakazelo uchungechunge entsha. Kulokhu, abasebenzisi asebethole babe abanikazi izitsha sizimisele ukuxoxa nabanye abathengi ezingaba nakho abakuthola. Ngokwesibonelo, abantu abaningi ezikhonjwe izici eziningana ezimbi. Eyokuqala isibambo metal (noma ikhanda), okuyinto ukufuthelana ngu umphumela ilangabi. Kulokhu inkinga uyalwa ukuba ukukhethwa best of the hotplate ubukhulu ethangini phansi ukususa kufanele uhambisane (noma ibe nkulu kunaleyo) ububanzi sikaphalafini igesi.
Iphuzu lesibili kulinganiselwe overstated, mayelana nokuthi zinengi, intengo. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi iyiphi professional Cookware nomkhiqizi emhlabeni wonke, noma kungaba "Zepter" noma "Tefal" kuyabiza kakhulu engaphezu kwengu-senzelwe evamile ukusetshenziswa yasendlini-analog. Nakuba abasebenzisi abaningi baye babika ukuthi ukukhiqizwa "Tomas Awe-Kuk" - lena evamile umugqa Ngokwesilinganiso, umklami okuyinto inkampani isiJalimane, kodwa ngenxa yazo zonke nemingcele ihlangabezana esisebenza naye Asian.
Brand "Mona Lisa", elinemishwe: ukubuyekeza nezincomo ikhasimende
Massage omatilasi: izinhlobo nokusetshenziswa
Indlela pasteurize namakani ngaphandle izikhala
Kanjani ukuze uphendukisa isiqophi nezinhlelo ezikhethekile